“Slalom Yacco” : lasan’i Laza ny fandresena | NewsMada
“Slalom Yacco” : lasan’i Laza ny fandresena
Tontosa, ny asabotsy sy omaly alahady, teny amin’ny “piste TMF” Ivato, ny dingana faharoa amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara, amin’ny “Slalom Yacco”. Nisongadina, Randriamifidimanana Laza, nitondra ny fiara Peugeot 106 DHL, izay nandrombaka ny fandresena tamin’ity.
Izy mantsy no nanana ny fe-potoana tsara indrindra, tamin’ireo fifaninanana roa natao, nandritra ny roa andro nihaonana.
Nifampitady taminy, tamin’ity, i Hugo Louvel izay nitana ny laharana faharoa. Ampaham-tsegondra kely monja mantsy ny nisarahan’izy mirahalahy teo amin’izany. Marihina fa miara-miainga amin’ny “piste” roa “A” sy “B”, mirefy 1, 5 km ny fiara. Natambatra ny fe-potoana vitan’ny tsirairay ka voahosotra ho mpandresy izay manana ny tsara indrindra.
Nanjakan’ny TMF Rally kosa ny teo amin’ny sokajy “4 Roues motrices”. Lasan’izy ireo avokoa mantsy ny telo voalohany ka nahazo ny laharana voalohany i Hery Be. Toy izany koa ny teo amin’ny Cross Car, izay lasan’ny MSA avokoa.
1 – Laza (Asa Tana) – P.106 DHL – (2 mn 49.51 s)
2- Hugo Louvel (FMMSAM) – Citroen C2 – (2 mn 54.01 s)
3- Fred (Asacm) – P.206 – (2 mn 54.91 s)
1-Hery Be – (TMF Rally) – Subaru Impreza – (2 mn 44.79 s)
2-Haja Danielson (TMF Rally) – Mitsubishi Evo 7 – (2 mn 45.78 s)
3-Ferre Jacques (TMF Rally) – Mitsubishi Evo 7 – (2 mn 50.57 s)
1-Kash (MSA) – 2 mn 59.68 s
2-Joujou (MSA) – 2 mn 45.78 s
3-Veve (MSA) – 2 mn 50.57 s